Ny voafidy tsara kokoa - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Ny safidy tsara kokoa
Misy ny ohabolan'ny hetsi-panoherana mihazakazaka miaraka amin'ny lohany lazaina. Midika izany teny izany rehefa misy olona sahirana ka mandalo eo amin'ny fiainana tsy voafehy sy tsy misy lohany ary variana tanteraka. Azontsika ampifandraisina amin'ny fiainantsika be atao io. Ny valiny mahazatra amin'ny "Manao ahoana ianao?" dia: "Tsara izany fa tsy maintsy mandeha aloha!" Na "Tsara fa tsy manam-potoana aho!" Ny ankamaroantsika dia toa mihazakazaka amin'ny asa iray mankany amin'ny manaraka, hatrany amin'ny toerana izay tsy manam-potoana fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra.
Ny adin-tsaintsika tsy tapaka, ny fitondran-tenantsika manokana ary ny fahatsapana tsy tapaka ho voafehin’ny hafa dia manimba ny fifandraisana tsara amin’Andriamanitra sy ny fifandraisana amin’ny mpiara-belona amintsika. Ny vaovao tsara dia ny hoe be atao matetika dia safidy izay miankina aminao tanteraka. Ny Filazantsaran’i Lioka dia manana tantara mahatalanjona izay maneho izany: «Ary nony nandeha Jesosy mbamin’ny mpianany, dia tonga tao amin’ny vohitra anankiray Izy, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nanasa Azy ho ao an-tranony. Nanana rahavavy atao hoe Maria izy. Nipetraka teo an-tongotry ny Tompo i Maria ka nihaino Azy. I Marta kosa nanao asa be dia be mba hahasoa ny vahiny. Farany, dia nitsangana teo anatrehan’i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, mety amin’ny rahavaviko va ny hamela ahy hanao ny raharaha rehetra? Teneno izy mba hanampy ahy! - Marta, Marta, namaly ny Tompo hoe: Be loatra ny ahiahy sy ny ahiahy anao, nefa zavatra iray ihany no ilaina. Maria no nifidy ny tsara kokoa, ka tsy tokony hesorina aminy izany » (Lioka 10,38-42 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Tiako ny fomba namindran'i Jesosy tamim-pitandremana an'i Marta. Tsy fantatsika raha nanomana sakafo matsiro i Marta na miaraka amin'ny fanomanana ny sakafo sy zavatra maro hafa mahaliana azy. Ny fantatsika dia satria ny sain'izy ireo dia nanakana azy ireo tsy hiaraka amin'i Jesosy.
Rehefa nitaraina tamin’i Jesosy izy, dia nanoro hevitra azy mba hibanjina ny tenany sy hifantoka aminy, satria manan-danja holazaina aminy izy. “Tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo hatramin’izao; fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo; fa izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo» (Jaona 15,15).
Indraindray dia tokony hifantoka indray isika rehetra. Tahaka an'i Marta, dia mety ho sahirana sy hanelingelina antsika hanao zavatra tsara ho an'i Jesosy isika ka tsy miraharaha ny fanatrehany ary mihaino azy. Ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy no tokony ho laharam-pahamehana. Io izany ilay tadiavin'i Jesosy rehefa niteny taminy hoe: "Maria no nifidy ny tsara kokoa". Amin'ny teny hafa, nametrahan'i Maria ny fifandraisany tamin'i Jesosy mihoatra ny andraikiny ary io fifandraisana io dia tsy azo esorina. Hisy ny asa tokony hatao foana. Fa impiry moa isika no manantitrantitra ireo zavatra heverintsika fa mila ataontsika fa tsy mijery ny lanjan'ny olona ataontsika? Andriamanitra no namorona anao ho fifandraisanao akaiky aminy sy amin'ny mpiara-belona aminy rehetra. Toa takatr'i Maria izany. Manantena aho fa manao izany koa ianao.